धर्ममाजस्तै पोशाकमा पनि निरपेक्षता – This is personal site of Prem Baniya
Posted on January 7, 2015 January 7, 2015 AuthorPrem BaniyaLeaveacomment
यो देशको गणतन्त्रले धर्मममाजस्तै पोशाकमा पनि निरपेक्षता अंगालेको छ र राष्ट्रिय पोशाकबाट दौरा सुरुवाल वा गुन्यूचोली र फरियालाई च्यूत गरेको छ । तर, भनेको छैन नेपालको राष्ट्रिय पोशाक के हो ? यसरी हेर्दा यो देश राष्ट्रिय पोशाकविहीन छ । तर, पनि घोषितअघोषित रुपमा देशको उच्च ओहोदामा बसेकादेखि सर्वसाधारणसम्मले दौरासुरुवाल र गुन्यूचोलीलाई राष्ट्रिय पोशाककै रुपमा अवलम्वन गरिरहेको देखिन्छ दृश्यमा । यद्यपि सत्य हो, यो देशमा बहुपहिचानका बहुपोशाकहरु छन्, तिनको साझा सम्मान आवस्यक छ । र, यसो हुदापनि यो देशलाई आप्mनो राष्ट्रिय पोशाक त चाहिन्छ नै चाहिन्छ भनी हामी बोलिआएका छौ र यसबीच अंग्रेजी सम्वतको पहिलो दिनलाई बिहीबार नेपाली पोशाक दिवसका रुपमा मनाइएको छ । अर्थात् पुस १७ गते राजधानीको वसन्तपुर डबलीमा एक रोचक कार्यक्रम भयो । र, त्यहाँ उपस्थित मानिसहरुले विविध संस्कृति झल्किने बिबिधताको एकतापूर्ण भावमा परम्परागत पोशाक लगाएर प्रदर्शन तथा झाँकी प्रस्तुत गरे । अंग्रजी नयाँ वर्षका दिन गरिएको त्यस कार्यक्रमको आसयमा आयोजकहरुले भनेका छन् नेपालीहरुले पाश्चात्य संस्कृति, संस्कार र पोशाकमा गौरव गर्न थालेका र आप्mनो पहिचान बिर्सिन थालेकामा त्यसो नगर्न र पहिचान जोगाउने सन्देश दिनका लागि अंगेज्री नया वर्षकै दिन यस्तो कार्यक्रम गरिएको हो । यसबारे आयोजकले भनेका छन्, सरकारले यो देशको पोशाकहरुको सम्मान गरोस् र यसको दिवस मनाओस् भन्नका लागि दबाबस्वरुप यस्तो कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो । कार्यक्रममा उपस्थितहरुको भनाइअनुसार देशले राष्ट्रिय पोशाक खारेज गरेको भएपनि नेपाली पोशाकहरुको त सम्मान गर्नैपर्छ । बिबिध जातजाती र भाषाभाषीको एकता कायम रहेको देशमा तिनको समान सम्मानका लागि पनि पहिचानको यो विषय प्रमुख भएकाले नेपाली पोशाकको सम्मानार्थ र रक्षार्थ आवाज उठाउनु परेको उनीहरुको तर्क छ । र, यो विषय आमनेपालीको स्वाभिमानको पनि विषय हो ।
एक प्रस्तावित नेपाली पोषाक दिवस । जो आजसम्म सरकारले मनाउने त के सोच्दै सोचेन शायद तर नागरिकस्तरबाट यसप्रकारको आवाज उठ्नु गौरबको विषय हो । यहा सरकारले त के नै गरेको छ र ? देशको गौरब र स्वाभिमानको उचाइका प्रति नागरिकस्तरबाट मात्रै केही उल्लेख्य कामहरु भइरहेको छ भन्दा ननिको लागेपनि सत्य यही हो । त्यसैले हामी बोल्दछौं ः कि, यो बहुल जात, धर्म, भाषा, संस्कार भएको देशमा । सवैको समान सम्मान हुनुपर्दछ र यसका लागि पनि सरकारले सबैको पहिचानको सम्मानमा तिनको संस्कारलाई सम्मान गर्नसक्नुपर्दछ । अनि पो देश सबैको प्रिय बन्दछ । जय स्वाभिमानबाट ।।
see more https://www.youtube.com/watch?v=DCojEqoIea8
← Previous Previous post: बधाई सिन्धुवासी, जुन जित ‘नजीर’ हो
Next → Next post: धर्ममाजस्तै पोशाकमा पनि निरपेक्षता